ကြံ့ဖွံ့ပါတီအား ထူထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း မြန်မာအသံမှ ကြေညာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကြံ့ဖွံ့ပါတီအား ထူထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း မြန်မာအသံမှ ကြေညာ
ကြံ့ဖွံ့ပါတီအား ထူထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း မြန်မာအသံမှ ကြေညာ
Posted by Bayote on May 5, 2010 in Myanma News, News |7comments
ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခဲ့သည့် ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအား တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ယနေ့ည ၈နာရီ ရုပ်သံ သတင်းတွင် ကြေညာသွားခဲ့သည်။ပါတီတည်ထောင်ခွင့် မလျှောက်မီ ၅ ရက်အလိုတွင် ဗိုလ်ချုပ်များအဖြစ်မှ အနားယူပြီး အရပ်ဝတ်သို့ လဲခဲ့ကြသည့် စစ်အစိုးရ၏ ၀န်ကြီး ဒုဝန်ကြီး စုစုပေါင်း ၂၇ ဦးနှင့်နအဖ အစိုးရက ခန့်အပ်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် ၂၉ ရက်နေ့တွင် လျှောက်ထားခဲ့ကြပြီး ယခုကဲ့သို့ မေလ ၄ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ သတင်းစာတွင်ပါရှိသည့် ကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အရ ပါတီတည်ထောင်ခွင့် ပြုရန်လျှောက်ထားသည့် ပါတီပေါင်း ၂၅ ပါတီရှိပြီး ၁၂ ပါတီအား တည်ထောင်ခွင့် ပြုပြီးဖြစ်ကာ၊ ယခင် ပါတီဟောင်းများအနက် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားသည့် ပါတီ ၄ပါတီအနက် ၃ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုပြီးဖြစ်သည်ဟု ပါရှိသည်။
ယနေ့ည ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်အရ လျှောက်ထားသည့် လက်ကျန်ပါတီ ၁၃ ပါတီအနက် ၈ ပါတီဝန်းကျင်ကို တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်သဖြင့် စုစုပေါင်း ပါတီ ၂၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။
ပါတီအသစ်များအနေဖြင့် တည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် နောက်ဆုံးနေ့ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ယခင်ပါတီဟောင်းများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ကြေညာသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် သတ်မှတ်ထားသဖြင့် လာမည့် ကြာသာပတေးနေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူထုထောက်ခံမှု အများဆုံးရရှိခဲ့သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရန် ၊ ပြန်လည် မှတ်ပုံမတင်ရန် အများဆန္ဒဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သဖြင့် လာမည့် ၇ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာကိုရယူထားသည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်အများစုပါဝင်ပြီး ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ကို ထိုအမည်အတိုင်း မပြောင်းလဲပဲဖွဲ့စည်းသည့် အချက်အပေါ်တွင် လူအများက တရားမျှတမှု မရှိဟု ရှုမြင်ကြသကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ထားသည့် ကြံ့ဖွံ့ပိုင် ဘဏ္ဍာငွေများ၊ အဆောက်အဦ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲပြီး အခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဆိုသည့် အချက်အပေါ် ယှဉ်ပြိုင်ဘက် နိုင်ငံရေး ပါတီများအနေနှင့်လည်း တရားမျှတမှု မရှိဟု ယူဆပြီး ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလာကြသည်ကို သတင်းဖေါ်ပြချက်များအရ ကြားသိရသည်။
sate pyat sa yar kyi
ပုဒ်မ ၄(ဃ) ရှိရက်နဲ့ ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ ၀န်ကြီးချုပ်၊ ၀န်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးဆိုတာတွေက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။
pyaw dot lu mu yay group thet thet bar so
bar lo party lote dar lal?
military ka 25% hluttaw mar ya htar dar bel
bar lo public ye’ 75% mar bar soe moe bo kyoe zar dar lal?
SPDC koayam amazing pyit dal byar.
ဦးက မလုံ ခေါင်က ပေါက်နေမှ တော့ ဘယ်နေရာမှာ များ ကောင်းတော့မှာလဲ ဗျာ..။
လုပ်ချင်သလိုသာ လုပ်ကြတော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုလေ………….